‘टाटाको मोटर किनाैंला, हेलिकोप्टर चढेर लाङटाङ घुमौंला’ | नेपाल आज
बुधबार, २७ भदौ २०७५ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले यसपटकको नाडा अटो शो सुरु गरिसकेको छ । १३ वर्ष यता बर्सेनि हुँदै आएको नाडा अटो सोमा अटोमोबाइल्स कम्पनीहरूले विभिन्न मोडलका गाडीहरू प्रदर्शनमा राख्ने गरेका छन् ।
भारतीय मोटर उत्पादक कम्पनी टाटाका गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीले पनि विभिन्न उत्पादनहरु नाडा अटो शोमा राखेको छ । सिप्रदीका प्रबन्धक प्रविन खतिवडाका अनुसार यस वर्ष सिप्रदीले टाटा मोटर्सका चारवटा मोडलहरू शोमा राखेको छ । खतिवडाका अनुसार उपभोक्ताको मन तान्ने गरी टाटाका मोटरमा लुक्स, फिचर, सुरक्षा, मूल्य आदिको संयोजन गरिएको प्रबन्धक खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘यस वर्षको नाडा सोमा हाम्रो कम्पनीले बम्पर अफरहरु राखेको छ । जस्तो कि नगदमा २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्मको छुट अथवा डायमन्ड नेकलेस ।’ त्यतिमात्रै होइन टाटाको मोटर किन्ने उपभोक्ताले हेलिकोप्टर चढेर लाङटाङ पुग्ने र त्यही चाबी हस्तान्तरण गर्ने अफर पनि ल्याएको छ ।
भारतमा टाटा आफैमा एक भरपर्दो ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ । टाटाका बस ट्रक मात्रै होइन कारहरु पनि उत्तिकै लोकप्रिय र बलिया छन् । हेर्दा आकर्षक, राम्रो माइलेज, टिकाउ र भरपर्दिला भएका कारण यी गाडीहरु उपभोक्ताको रोजाईमा पर्दै आएका छन् । सिप्रदीले यसपटक नाडा अटो शोका लागि विशेष प्राथमिकता दिएका केही मोटरहरु निम्नानुसार छन्ः
टाटा मोटर्सको टिआगो पहिलो आकर्षण भनेको यसको स्टाइल नै हो । धेरै उपभोक्ताहरुको ध्यान तानिने भनेको स्टाइलमै हो । समयअनुसार उपभोक्ताले पुराना डिजाइन छाड्नै नयाँ कारहरु मन पराउँछन् । ३७४६ एमएम लम्बाई, १६४७ एमएम चौडाई र १५३५ एमएम उचाई रहेको टिआगोको व्हील बेस २४०० एमएम छ । ग्राउण्ड क्लिअरेन्स १६५ एमएम छ ।
टिआगोका तीन मोडल
टिआगोका तीन मोडलहरू छन् । टिआगो रेभोट्रोन एक्सइ, रेभोट्रोन एक्सएम र रेभोट्रोन एक्सजेट । यी मोडलहरू ११९९ सिसीका छन् । तीन वटै पेट्रोल इञ्जिनबाट चल्छन् ।
यी कारहरुको विशेषता र मूल्य ‘जस्टिफाइड’ लाग्छ । आफ्नो बजेटमा आउने गरी उपभोक्ताले यी कारहरु छान्न सक्छन् । टिआगो रेभोट्रोन एक्सइको मूल्य २४ लाख ९५ हजार, एक्सएमको मूल्य २७ लाख ९५ हजार, एक्सजेटको मूल्य ३१ लाख ५५ हजार कायम गरिएको छ ।
रेभोट्रोनको माइलेज प्रतिलिटर २३.८४ किलोमिटर हो । तीन वटा सिलिण्डर रहेको रेभोट्रोनको इञ्जिन टाइप ‘१.२ लिटर थ्रि सिलिन्ण्ड विद मल्टी –ड्राइभ मोडल्सः इको एण्ड सिटी’ हो ।
३५ लिटर फ्युल ट्यांक रहेको रेभोट्रोनको अगाडिको चक्कामा डिस्क ब्रेक छ भने रिअरमा ड्रम छ । ९३० केजी देखि १०१२ किलोग्रामसम्म यसको वजन हुन्छ । इञ्जिनको क्षमताको मापन गर्ने भनेको टर्कबाट हो । ११९९ सिसीको रेभोट्रोनको म्याक्सिमम पावर पिएस एट द रेट आरपिएममा ८५ पिएस एट द रेट अफ ६००० आरपिएम छ । त्यस्तै म्याक्सिमम टर्क ११४ एनएम एट द रेट अफ ३५०० आरपिएम छ । यस्ता प्राविधिक विषयहरुमा कुनै अस्पष्टता भए नाडा शोमा रहेका सिप्रदीका कर्मचारीहरुले स्पष्ट पारिदिन्छन् । उपभोक्ताले कार किन्नु भन्दा केही प्राविधिक विषय पनि बुझेर खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रविधि तथा एप्स
लामो यात्राको दौरान कतै हराइयो भने पनि कार भित्र रहेको नेविगेसन एप्स प्रयोग गरेर बाटो सहजै भेटाउन सकिन्छ । नेविवगेसन एप्स भनेको म्यापसम्बन्धी हो । कारमा अर्को ‘ज्युक कार’ भन्ने एप्स पनि छ । यसले पनि गन्तव्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । कारलाई लग्जरियस बनाउन इन्फोटेइन्मेन्टमा पनि ध्यान दिइएको छ । चार वटा स्पिकर, एफएम, युएसबी कनेक्ट गर्ने सुविधा, ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, फोन बुक, कल लग, स्पिडका आधारमा अटोमेटिक भोल्युम नियन्त्रण, स्टेअरिङमै फोन र अडियो नियन्त्रणको सुविधा राखिएकोछ ।
टिआगो कारको भित्र चालक र चालकको छेउको सिटका लागि दुईवटा एयरब्याग छ । इञ्जिनलाई हल्का बनाउने र स्पिडमा पनि नियन्त्रणमा राख्ने इमोबिलाइजर प्रविधि छ । कारको स्पिड बढ्दै जाँदा ढोकाहरु आफै लक हुन्छन् । पार्किङ सेन्सर, डे–नाइट आइआरभिएम सुविधा छ । पछाडि रेअर पार्किङ सेन्सर छ ।
एबिएस विद एबिडीः यो विशेषता भएको मोटरहरु उच्च गतिमा पनि चालकले सजिलै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । एबिएस भन्नाले एन्टि लक ब्रेकिङ सिस्टम हो भने एबिडी भन्नाले एलोक्ट्रोनिक ब्रेकिङ सिस्टम हो । यो ब्रेक सिस्टममा गाडी आफैले आफूसँग भएको भारका आधारमा कुन चक्कामा बढी ब्रेक लगाउने कुनमा कम भन्ने सन्तुलन मिलाउने गर्छ ।
टिआगो कति आरमदायी ?
टिआगोमा यात्रा गर्नेहरुकालागि अधिकांश आधुनिक सुविधा टाटा मोटर्सले राखेको छ । जस्तो कि मल्टी ड्राइभ मोड, एअर कन्डिसन, पुरै फोल्ड गर्ने सकिने पछाडिका सिटहरु, चालकको सिट एडजस्ट गर्न सकिने, चाबीमै सबै ढोकाहरु बन्द गर्न मिल्ने सुविधा, ड्राइभर फुट रेस्ट लगायत अन्य धेरै ।
राम्रो, सहज र चलाउँदा पनि आनन्द लाग्ने गरी टिगोर कार डिजाइन गरिएको छ । ३९९२ एमएम लम्बाई, १६७७ एमएम चौडाई र १५३७ एमएम उचाईको व्हीलबेस २४५० एमएम छ । ग्राउण्ड क्लिअरेन्स चक्का अनुसार केही फरक छ । आर १३ व्हीलमा १६५ एमएम र आर १५ व्हीलमा १७० एमएम ग्राउन्ड क्लिअरेन्ट हुन्छ ।
टिगोर पाँच मोडलमा उपलब्ध छ । ती हुन्:
१.टिगोर रिभोट्रोन एक्सइ
२. टिगोर पि डब्लु आर टिएसको साथै आरटी एक्सइ
३. रेभोट्रोन एक्सटी
४. रेभोट्रोन एक्सजेट
५. रेभोट्रोन एक्स जेटओ ।
११९९ सिसीको यो कार पेट्रोलबाट गुड्छ ।
टाटाको टिगोर इभी अर्थात इलेक्ट्रिक भेइकल पनि यसपटक नाडा शोका भिजिटरहरुले देख्ने छन् । यो इभी तत्काल बिक्रीकालागि भने होइन । प्रदर्शनका लागि मात्रै राखिएको छ । अबको विश्वमा इलेक्ट्रिक भेइकल नै प्रमुख रुपमा चल्ने अनुमान पनि छ ।
सबै सुविधाहरूलाई नियाल्दा यसको मूल्य जायज भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । टिगोरको मोडल रेभोट्रोन एक्सइको मूल्य २७ लाख २५हजार, आरटी एक्सइ विथ पिडब्लु एण्ड टिएस २७ लाख९५ हजार, एक्सटी २९लाख ९५ हजार, एक्सजेट ३१ लाख ९५ हजार, एक्सजेटओ ३३ लाख ५५ हजार कायम गरिएको छ ।
३ वटा सिलिण्डर प्रयोग हुने यो कारमा ३५ लिटर इन्धन अटाउछ । १.२ रेभोट्रोन पेट्रोल इन्जीन रहेको कार इको तथा सिटी मोडमा सहजै गुड्छ ।
हार्मनको कनेक्टनेक्स्ट टचस्क्रिनको इन्फोटेनमेन्ट प्रविधि छ । आरामदायी बनाउन यस भित्र अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल प्रविधि जडान गरिएको छ । स्पेसको लागि ४१९ लिटरको चौडाइमा ४ बार मेकानिजम सिस्टम छ । यस भित्र २४ वटा सामान प्रयोग गर्न मिल्ने युटिलिटी बनाइएको छ । भरखरै भित्रिएको नयाँ सिएससीसँगै एबिएस र इबिडीको प्रयोग गरिएको छ ।
कारको भित्र दुइवटा एयरब्याग, पछाडि रेअर पार्किङ सेन्सर, सिटी र इको दुवैमाप्रयोग हुन गरी मल्टी ड्राइभमोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी टाटाको नेक्सनकारको डाइमेन्सन ३९९४ एमएमको लमबाई १८११ एमएम चौडाई र १६०७ एमएम उचाई छ । २०९ एमएमको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भएको कारण स्विफ्ट नेपालका कच्चीदेखि चिल्ला सडकहरुमा लागि पनि सहजै गुड्न सक्छ । ११९८ सिसी र १४९७ सिसीमा उपलब्ध नेक्सनका कारण पेट्रोलबाट चल्ने पनि छन् । डिजेलबाट चल्ने पनि छन् ।
नेक्सन कारको नौंवटा मोडलहरु छन् । ती हुन्ः
१.नेक्सन रेभोट्रोन एक्सइ– मूल्य रु. ३,४९५,०००/–
२. नेक्सन रेभोट्रोन एक्सएम– मूल्य रु.३,७३५,०००/–
३. नेक्सन रेभोट्रोन एक्सजेट प्लस – मूल्य रु.४,२८५,००० /–
४ नेक्सन रेभोट्रोन एक्सजेट प्लस डेयुलटोन– मूल्य रु.४,३७५,००० /–
५. नेक्सन रेभोटोर्क एक्सटी– मूल्य रु.४,२८५,००० /–
६. नेक्सन रिभोटर्क एक्सजेड प्लस – मूल्य रु.४,५९०,००० /–
७. नेक्सन रिभोटोर्क एक्सजेड प्लस ड्युअल टोन –मूल्य रु.४,६८५,००० /–
नेक्सनमा तीन लेअरको ड्यासबोर्ड छ भने भित्र हार्मनको ८ वटा स्पिकरहरु र एएमटी पनि छ । फ्लोटिङ इन्फोटेन्मेन्ट टचस्क्रिन ड्यासटपमा छ । एबिएसको साथै इबिडिको प्रविधि पनि छ ।
सुरक्षाको लागिअगाडि डियुल एयरब्याग छ भने पार्किङ गर्दा गाइड गर्न रेअर क्यामराको साथ अल्ट्रासोनिक सेन्सरको प्रविधि पनि छ ।
टाटाकै अर्को मोडेल हेक्जा एक्सटी हो जस्को मूल्य ९१ लाख ५५ हजार छ । २१७९ सिसिको डिजेल इञ्जिन रहेको यो मोटरसको बाहिरी आकारप्रकार ४७८८ एमएम लम्बाई, १९०३ एमएम चौडाई, १७९१ एमएमको उचाई रहेको छ । २८५० एमएमको व्हील बेस छ ।
८ रङको एम्बिएन्ट मुड लाइटिङ्ग छ जसले गर्दा कार भित्रै राति पनि दिनकै जस्तो गरी उज्यालो पार्न सकिन्छ । यो कारमा ४०० इन्जिनको भेरीकोर छ जसले ६ गुना बढी गति बढाउछ । एडब्लुडी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल जसले जस्तो पनि बाटोमा सहजै कुदाउन सक्छ । ५ इन्चको स्क्रिन टच छ जसमा ३२० वाट डिएसपी एमप्लिफायर प्रविधि रहेको छ ।
अगाडि र साइडमा गरी ६ वटा एयर ब्यागहरु छन् । एचएचसी र एचडिसीले उकालो र आरालोमा कार चलाउन सहज गर्छ भने इएसपीले घुमाउरो बाटोहरुमा सहज गर्छ । ट्रासिङ कन्ट्रोलले कच्ची बाटोमा कार चलाउन सजिलो गर्छ । राति प्रष्ट देखिनको लागि अटोमेटिक हेडल्याम्प छ । ठूलो पानी पर्दा ७ गुणा बढी गतिको वाइपर छ । गर्मीमा आनन्द लिन पनि कार भित्रै पेय पदार्थ चिसो गर्ने र्याक पनि छ ।
यो लग्जरी कार हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । सबै दृष्टिकोणबाट यो कारलाई अत्याधुनिक, उच्च गुणस्तरको बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
कहाँ गएर किन्ने ?
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.ली.
फोन नं. ०१–४२५०६१०
टोल फ्रि नं. (पैसा नलाग्ने) १६६००१५५७७७ (एनटिसी) र ९८०१५७५७७७ (एनसेल)
फोन नं. ०१–४४१९४४९, ०१–४४१३५६७
फोन नं. ०१–५५२६८३८